Qaabeynta Xiaomi Home App - isbedelka gobolka - mini-hage - SmartMe
Beddelida Gobolka ee Xiaomi Home - hage yar
Waxa daabacay	 Michal
Aqar, hage qofkasta, xiaomi smart home, xiaomi guriga
Waxay dhacdaa in marka ugu horreysa ee aad shidso qalabka aadan ku dhex arki karin barnaamijka 'Xiaomi Home application', oo macnaheedu yahay aanaan ku rakibi karin (ku xirnow guriga aad dooratay oo aan gacanta ku hayno taleefanka gacanta). Sababaha way kala duwanaan karaan, waxaana ka mid ah:
ma lahan xiriir WiFi (oo ku dhex yaal router ama taleefanka),
telefoonka kuma xirna taleefanka,
baahida loo qabo in la sameeyo qalab cusub (aalado kala duwan oo ku xiran aaladda),
irridda loo yaqaan ZigBee (sida lagu sharaxay tan Qodobka),
Gobolka khaldan ayaa lagu xushay arjiga.
Casharkaan, waxaan jeclaan lahaa inaan diirada saaro qodobka ugu dambeeya. Qalabka ka socda nidaamka deegaanka ee Xiaomi ayaa lagu arki doonaa barnaamijka 'Xiaomi Home app' kaliya markaan dejino Gobolka ku habboon ee arjiga. Alaabada ay dalbadaan dukaamada sida AliExpress, Gearbest ama Banggood, badanaa waxay noqon doontaa "Shiinaha" Gobolka (iibiyuhu haddii kale ku muujiyo sharraxaadda alaabta). Haddii aan ku dalbanno aaladda dukaanka Polish-ka, waxaa jirta fursad ah in Gobolka aan rabno inaan dhigno uu yahay “Poland”.
Alaabooyinka la dalbaday waa in si taxaddar leh loo doortaa, maxaa yeelay markasta oo aan rabno inaan ka xakameyno shey ka yimid Gobol ka duwan, hannaanka soosocda waa in lagu soo celiyaa barnaamijka 'Xiaomi Home app', oo ah waqti qaadasho iyo dhib aan habboonayn. Intaas waxaa sii dheer, ma abuuri kartid Xeerar iyo Sawirro otomaatig ah adoo adeegsanaya aaladaha ku yaal Gobollada kala duwan ee dalabkayaga.
Hoos waxaan ku soo bandhigayaa tilmaamaha ku saabsan sida loo beddelayo Gobolka la soo xulay.
1. Bilaabeyso barnaamijka 'homeia' Xiaomi Home
2. Shaashadda waxaad ka arki kartaa nadiifiye hawo oo ku xiran server-ka Poland. Tag Xogta
3. Tag goobaha wax lagu dejiyo
4. Aad Gobolka
5. Ka xulo gobolka liiska danahaaga (kiiskan oo loogu talagalay aaladaha loogu talagalay suuqa Shiinaha). Kadib guji Save oo xaqiiji daaqadda pop-up-ka aad rabto inaad beddesho gobolka
6. Barnaamijka 'Xiaomi Home app' ayaa dib loo bilaabi doonaa wuxuuna ku weydiin doonaa inaad gasho. Gali faahfaahintaada oo guji Soo gal
7. Isbedelka gobolka ayaa lagu guuleystay. Shaashadda waxaad ku arki kartaa aaladayda ku xiran server-ka Shiinaha
8. Waad dib u gali kartaa Dejinta Muuqaalka si aad u hubiso Gobolka aad hadda dooratay
Intaasi waa intaas. Sidaad u aragto, beddelka Gobolka ee goobaha barnaamijka Xiaomi Home waa arrin xilligan la joogo. Nidaamka oo dhan uma baahna xirfado gaar ah waxaana fulin kara qof walba, tallaabo tallaabo ah, iyadoo la raacayo tilmaamaha kor lagu soo sheegay.
Qalabka Guriga ee Xiaomi - maxaad ogaanaysaa?
Xusuusnow in aasaaska hawlgalka gudahood Xiaomi Home App ay tahay abuurista koonto Mi bilaash ah. Hawsha isdiiwaangalinta lafteedu ma leh dhibaatooyin dheeri ah. Software-ka soo saaraha Shiinuhu wuxuu u oggolaanayaa inuu dhexgalo aaladihiisa, taas oo ah dareenka qaabeynta iyo hirgelinta guri caqli badan.
Waxaa ka mid ah qalabka la waafajiyay si ay ula shaqeeyaan Xiaomi Home App waad sheegi kartaa:
makiinadaha dharka lagu dhaqo,
Xakameynta iyaga, iyo sidoo kale xakameynta fog ayaa ah mid dareen leh, iyo sidoo kale dejinta xalal si toos ah uga shaqeeya shaqada guriga caqliga leh. Hawlaha qaarkood waxay ku shaqeeyaan iyadoo kuxiran awooda awooda casriga gaarka ah - tusaale ahaan, "IR LED" waa lama huraan in taleefankaaga loo rogo koontaroolka meelaha fog laga hago.
Xallinta ka dhex aloosan barnaamijka 'Xiaomi Home app' ayaa si isa soo taraysa u soo caan baxday, iyo kuwo kale oo ay ugu wacan tahay xiisaha ay u qabaan dukaameysiga iyada oo loo marayo Cali Express. Furitaanka bakhaarka rasmiga ah ee astaan-weyntan ee Poland waxay ahayd mid aad u muhiim ah.
Qalabka loo yaqaan 'Xiaomi Home app' ee sida saxda ah loo habeeyey wuxuu kuu oggolaanayaa inaad xakameyso noocyada qalab ee horey loo soo sheegay, iyo sidoo kale qalabkooda otomaatiga. Raaxo-maalmeed kasta waxaa laga dareemayaa, jikada, jikada, qolka fadhiga ama qolalka kale ee guriga, abaar ama xafiis. Waxaa la filan karaa sanadaha soo socda inay keeni doonaan adeegyo dheeraad ah oo ku saabsan astaanta Shiinaha.
Waxa xiiso leh, dhowr sano ka hor lama fileynin in nidaamka Xiaomi uu sidaas caan ku noqon doono suuqa Polish. Cidna kama fikirin inay suurta gal tahay in afafka Poland iyo Poland loo dhigo gobal ahaan. Maanta, kama walwalaysid caqabad xagga luqadda ah ama dejinta wershadaha aaladaha dibadda laga keeno. Hagaheenu wuxuu ka dhigayaa dejinta gobolka saxda ah wuxuuna sahlaa nidaamka is dhexgalka buuxa iyadoo la adeegsanayo Polish.
Horumarinta barnaamijka Home-ga waxay kuxirantahay xiisaha sii kordhaya ee qaybaha guryaha caqliga leh ee Shiinaha. Iibinta taleefannada casriga ah iyo aaladaha kale ee Xiaomi - oo ay ugu wacan tahay iskaashi lala yeesho hawl wadeenada hogaaminaya ee ka hawl gala Poland - waa mid ka mid ah isbeddelada xiisaha badan ee warshadan Miisaaniyada ka hortagga ah ee noocyada badan ee sharafta leh waxay dhiirrigelisaa kalsoonida Poles iyo mowqifkeeda qiimaha wanaagsan.
Goobteenna waxaa loo sameeyay adeegsadayaasha xiiseynaya tikniyoolajiyada guryaha casriga ah. Haddii aad raadineyso macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan mowduucan, fiiri baraha bulshada ama ka tag faallooyinkaaga. Waxaan ku faraxsanahay inaan ka jawaabno su'aalo dheeraad ah oo la taaban karo oo ku saabsan hawlgalka codsigan. Ma jiraan dhibaatooyin aan la xallin karin, oo goob kastaa waxay u baahan tahay oo keliya dhawr gugood, tallaabo tallaabo tallaabo ah.
Soo jiidasho leh teknolojiyad cusub oo fikradihiisu weligood dhammaadaan! Wuxuu had iyo jeer helaa qalab cusub oo uu ku tijaabiyo, naqshadeeyo xalal caqli badan isla markaana isaga laftiisa isagu dhiso. Nin orchestra ah oo isna ku ciyaaraya si weyn! Sabuurka. wuxuu ogaadey sida loola xiriiro saacadaha digniinta Shiinaha, sidaa darteed xushmee;)
News, casriga ah, Hoyga Xiaomi
Xiaomi wuxuu u dabbaaldegaa: Mi Fan Festival 2021 ... iyo Google iyo Qualcomm ayaa ku soo biiraya dabaaldega!
fanax fanaan, xiaomi, xiaomi guriga
Xiaomi wuxuu soo bandhigayaa sanadlaha Mi Fan Festival (MFF). Bandhig faneedka 2021 waxaa diirada lagu saari doonaa hal ku dhigga ah "Baadh Fursadaha". Xiaomi wuxuu ku casuumi doonaa taageerayaasha Mi inay ka wada hadlaan lana wadaagaan asxaabta iyo qoysaska khibradooda ku saabsan ...